Mayelana NATHI | IVishi (Zhejiang) Fluid Technology Co., Ltd.
Isungulwe ngawo-1970 eSouth Korea, i-YSC ingumkhiqizi nomphakeli wemikhiqizo ye-pneumatic enevolumu ephezulu emkhakheni wemboni ezisebenzelayo. Ngo-2000, i-YSC (China) yathatha iQingdao njengekomkhulu layo futhi yakhiqiza ukwenziwa komoya okuhlukahlukene, ukulawula, ukwenziwa kwezinto nezingxenye ezisizayo, ezisetshenziswa kakhulu emikhakheni yezimboni ezishintshayo engaphezu kwezingama-200 njengezimoto, i-elekthronikhi, izinto zikagesi, ukupakisha, imishini, ukusansimbi, ukulawula izinombolo, njll, ukuhlinzeka ngezixazululo ezinembile nezizwakalayo zomoya zamakhasimende angaphezu kuka-100,000.
Ngemuva kweminyaka eminingi yemizamo, i-YSC (China) ivelele kuzixhumanisi ezisemqoka zokulawulwa kokuqondiswa nokusebenza komoya kuhlelo lwe-pneumatic. Ngasikhathi sinye, ngenzuzo yokuthakwa kwemikhiqizo ebanzi kanye nenethiwekhi yokuthengisa nempahla yezifundazwe nemizi engaphezulu kweshumi eChina, i-YSC (China) ihlinzeka amakhasimende ngensizakalo yokumisa okukodwa okusheshayo.
Njengombambiqhaza owenziwe e-China 2025, i-YSC (China) izosebenza kanzima, iphikelele emisha, igcine inhloso yayo engqondweni, iqhubekele phambili, iqhubeke nokulandela umgomo wokungathunjwa ngenzuzo ephansi futhi ingahlukumezi ku-manulife, futhi izinikele ekuthuthukisweni kwemishini ne-automation eChina.
Ukuze uhlangabezane nezidingo zakho, ungangabazi ukuxhumana nathi.